महिनावारी भएको बेला ‘शा’री’रि’क’ ‘स’म्प’र्क’ गर्न हुन्छकि हुदैन ? • raradiodarpan.com
महिनावारी भएको बेला ‘शा’री’रि’क’ ‘स’म्प’र्क’ गर्न हुन्छकि हुदैन ?
उनले उपलब्धी हासिल गर्नलाई सर्जरीको सहारा लिएकी हुन् । अलेग्राले पटक पटक सर्जरी गराएकोले उनको ब्रेस्टको साइज ५४ इन्च भएको हो । उनले धेरै दुख भएपनि आफु खुशी भएको प्रतिक्रिया दिएकी छिन् । अलेग्राले ब्रेस्ट सर्जरी गरेपछि वर्षभरीमा केही शोमा भाग लिएर ६४ लाख सम्म कमाइ गरेको जानकारी दिएकी छिन् । एजेन्सी